right share(right share) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
हाइड्रोको हकप्रदमा खुकुलो नीति: सहायकलाई २००% र निर्माणाधीनले १००% सम्म निश्कासन गर्न पाउने
काठमाण्डौ । आफू मुख्य कम्पनीका हैसियतामा ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व रहने गरी सहायक कम्पनी खोलेमा २०० प्रतिशतसम्म हकप्रद सेयर निश्कासन गर्न पाउने बाटो खुलेको छ । विद्युत नियमन आयोगले विद्युत सम्बन्धी कम्पनीको सेयरको सार्वजनिक निश्कासनको पूर्व स्वीकृति तथा नियमन सम्बन्धी निर्देशिका २०७८ लागू गर्दै यस्तो व्यवस्था...
ङादी ग्रुप पावरद्वारा २०% बोनस सेयर प्रस्ताव, २००% हकप्रद पनि जारी गर्ने
काठमाण्डौ । ङादी ग्रुप पावर लिमिटेडले लाभांश वितरण र हकप्रद सेयर गर्ने निर्णय गरेको छ। कम्पनी सञ्चालक समितिको आज दिउँसो ३ बजे बसेको बैठकले गत आर्थिक वर्ष २०७७/८८ का लागि लाभांश प्रस्ताव गर्नुका साथै लाभांश वितरणपछि कायम चुक्तापुँजी २०० प्रतिशत हकप्रद जारी गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट हाल कायम...
शिखरका सेयरधनीको चिन्ता–‘समयमै विवाह नगरे कन्या नराम्रो पाइएला नि !’
काठमाण्डौ । देशकै टप निर्जीवन बीमा कम्पनी, शिखर इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिप प्रकाश पाण्डेले मर्जर र एक्वीजिसनको बाटोमा समेत अग्रसर हुने घोषणा गरेका छन् । लगानीकर्ताहरुले 'समयमै विवाह नगरे कन्या राम्रो पाइन्न' भनेपछि उनले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । सोमबार काठमाण्डौको थापाथलीस्थित शिखर बिज सेन्टर...
सीआइटीसहित ६ कम्पनीका रु. १४ अर्बको हकप्रद आउँदै
काठमाण्डौ । निकट सयममै ६ कम्पनीका करिब १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर आउने भएको छ । निकट समयमा ३ हाइड्रोपावर, २ अन्य सेक्टर र १ विकास बैंक समूहबाट कुल ६ कम्पनीका करिब १४ अर्ब रुपैयाँको हकप्रद आउन लागेको नेपाल धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ । हाइड्रोपावर, विकास बैंक र अन्य समूह गरी कुल ६ कम्पनीका १३ करोड ८३ लाख ९० हजार १५७ दशमलव ४० सेयर...
आजबाट नेपाल फाइनान्सको हकप्रद निष्कासन, कहिलेसम्म कायम सेयरधनीले दिन पाउने आवेदन ?
काठमाण्डौ । नेपाल फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडले आज बिहीबार (मंसिर ४ गते) बाट १ः१.२५ अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्कासन गरेको छ। कम्पनीले चुक्ता पुँजी १३ करोड ५८ लाख ५०० रुपैयाँको १२५ प्रतिशतबराबरको हकप्रद निष्कासन गरेको हो। कम्पनीले १०० रुपैयाँ अंकित दरका १६ करोड ९७ लाख ५० हजार ६२५ रुपैयाँबराबरको १६ लाख ९७ हजार ५०६.२५ कित्ता हकप्रद जारी गरेको...
नेपाल फाइनान्सको हकप्रद मंसिर ४ बाट निष्कासन हुने, कहिलेसम्म कायम सेयरधनीले पाउने ?
काठमाण्डौ । नेपाल फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडले आउँदो मंसिर ४ गतेदेखि १ः१.२५ अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ। कम्पनीले चुक्ता पुँजी १३ करोड ५८ लाख ५०० रुपैयाँको १२५ प्रतिशतबराबरको हकप्रद निष्कासन गर्न लागेको हो। कम्पनीले १०० रुपैयाँ अंकित दरका १६ करोड ९७ लाख ५० हजार ६२५ रुपैयाँबराबरको १६ लाख ९७ हजार ५०६.२५ कित्ता हकप्रद जारी...
समृद्धि फाइनान्सको हकप्रदमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन
काठमाण्डौ । समृद्धि फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडले निष्कासन गरेको २०० प्रतिशत हकप्रद सेयरमा खरिद आवेदन दिने आज बिहीबार अन्तिम अवसर रहेको छ। कम्पनीले गत असोज १६ गतेदेखि सेयरधनीहरुका लागि चुक्तापुँजी १८ करोड १९ लाख रुपैयाँको १ः२ अनुपातले हुन आउने रु. १०० अंकित दरका ३६ लाख ३९ हजार ६०६ कित्ता हकप्रद निष्कासन गरेको थियो। सेयरधनीहरुले आज बैंकिङ...
अपि पावरको हकप्रद कात्तिक १४ बाट निष्कासन हुने, कहिलेसम्मका सेयरधनीहरुले पाउने ?
काठमाण्डौ । अपि पावर कम्पनी लिमिटेडले आउँदो कात्तिक १४ गतेदेखि सेयरधनीहरुका लागि १ः०.४७ अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ। कम्पनीले १०० रुपैयाँ अंकित दरका ५६ करोड ७० लाख रुपैयाँको ५६ लाख ७० हजार कित्ता हकप्रद निष्कासन गर्न लागेको हो। हकप्रद सेयरको बिक्री प्रबन्धकमा सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। हकप्रदमा...
समृद्धि फाइनान्सको २००% हकप्रद आजबाट निष्कासन, कहिलेसम्मका सेयरधनीले पाउँछन् ?
काठमाण्डौ । समृद्धि फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडले आज शुक्रबार (असोज १६ गते) बाट २०० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गरेको छ। कम्पनीले चुक्तापुँजी १८ करोड १९ लाख रुपैयाँको १ः२ अनुपातले हुन आउने हकप्रद निष्कासन गरेको हो। कम्पनीले रु. १०० अंकित दरका ३६ लाख ३९ हजार ६०६ कित्ता हकप्रद निष्कासन गरेको छ। हकप्रद निष्कासन तथा तथा बिक्री प्रबन्धकमा...
समृद्धि फाइनान्सको २००% हकप्रद असोज १६ बाट निष्कासन हुने, कहिलेसम्मका सेयरधनीले पाउने ?
काठमाण्डौ । समृद्धि फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडले यही असोज १६ गतेबाट २०० प्रतिशत हकप्रद सेयरको निष्कासन खुला गर्ने भएको छ। कम्पनीले चुक्तापुँजी १८ करोड १९ लाख रुपैयाँको १ः२ अनुपातले हुन आउने हकप्रद निष्कासन गर्न लागेको हो। कम्पनीले रु. १०० अंकित दरका ३६ लाख ३९ हजार ६०६ कित्ता हकप्रद निष्कासन गर्नेछ। हकप्रद निष्कासन तथा तथा बिक्री...
सिभिल लघुवित्तको हकप्रदमा खरिद आवेदन दिने आज अन्तिम मौका
काठमाण्डौ । सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले निष्कासन गरेको सतप्रतिशत हकप्रद सेयरमा खरिद आवेदन दिने आज सोमबार (भदौ २९ गते) अन्तिम मौका रहेको छ। संस्थाले गत साउन २५ गतेदेखि चुक्तापुँजी ११ करोड ४१ लाख १४ हजार रुपैयाँको १ः१ अनुपात अर्थात विद्यमान एक कित्ता साधारण सेयरबराबर नयाँ एक कित्ता साधारण सेयर सेयरधनीहरुका लागि बिक्री...
ह्युन्डईले गर्दैछ ठूूलो तयारी, ल्याउँदैछ शानदार दुई एसयूभी र एउटा ह्याचब्याक कार
काठमाण्डौ । ह्युन्डई क्रेटालाई प्राप्त ठूलो सफलतापछि अब ह्युन्डई कम्पनी भारतमा आफ्नो एसयूभी रेन्ज बढाउने तयारी गरिरहेको छ। यसका लागि कम्पनीले भारतमा दुईवटा एसयूभी र एउटा ह्याचब्याक कार ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। समाचार स्रोतका अनुसार कम्पनीले आफ्नो क्रोटाको ७ सिटे भर्जनसँगै ८ सिटे ह्युन्डई प्यालिसेड एसयूभी ल्याउने पनि तयारी...